eNasha.com - लौ यस पाला पनि बचे !
लौ यस पाला पनि बचे !
प्रशान्त तामाङलाई अब कसले पो नचिन्ला ! सबैभन्दा अनौठो मोड आएको छ, इण्डियन आइडलमा यतिबेला । प्रशान्त तामाङ, उत्कृष्ट तीन बन्न पुगेका छन् । भनिन्छ, उनको भोट इण्डियन आइडलको इतिहासमा कुनै प्रतियोगीको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी खसेको भोट हो । खसेका १५ लाख भोट मध्ये आधा त उनकै मात्र थियो भनी केहीको दाबी छ ।
केही समय अघिसम्म प्रशान्तको गायन मन नपराउनेहरु पनि उत्कृष्ट तीनमा आइसकेपछि अब उनलाई इण्डियन आइडल बनाउनै पर्छ भन्नेहरुको कमी छैन । तर यो कुरा सत्य हो, उत्कृष्ट १० मा छानिएका प्रतियोगीमध्ये उनी सबैभन्दा कमजोर गायक चाहिँ पक्कै हुन् । तर अब यो कुराको महत्व छैन, महत्व के कुराको छ भने अब प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडोलको ताज नजिक छन् ।
अहिले गुगलमा उनको नाम मात्र टाइप गर्ने हो भने एक सेकेण्डभित्र १७ हजार २ सय पेजहरु देखाउँछ । यसबाट थाहा हुन्छ, उनी कति लोकप्रिय भइसके ! प्रशान्त तामाङलाई नै माया गरेर बनाइएको एउटा ब्लग साइटले प्रशान्त यति धेरै लोकप्रिय हुनुका केही कारणहरु उल्लेख गरेको छ, जुन मलाई पनि रोचक लाग्यो ।
१. न्यायाधीशहरुको उनीप्रतिको बेलगाव
प्रख्यात कवि जावेद अख्तरलाई उनको स्वर मन पर्दैन । उदितनारायण झाले पनि उनलाई प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याइँ गरे । अनु मल्लिकले त एक पटक प्रशान्तको यति बेइज्जति गरे कि चुरोट खाँदिनँ भनेर भन्दा पनि उनी मान्न तयार थिएनन् । सबैको प्रशंसा गर्ने अलिशा चिनोयले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा उनको बारेमा उति नराम्रो भनेकी छैनन् तर पनि उनको बेलाबेलामा खप्की प्रशान्तले खाइरहेकै हुन् ।
बेला न कुबेला न्यायाधीशहरुको खप्कीका कारण पनि प्रशान्तलाई माया गर्नेहरुको संख्या बढेको हो ।
२. भारतीय प्रहरीको बढ्दो अलोकप्रियता
भारतीय प्रहरीको वास्तवमै इज्जत घट्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रहरीमा काम गर्ने एउटा जवान, कसैले सोच्दै नसोची उत्कृष्ट १० मा छानिन पुग्यो । कलकत्ता प्रहरीका यी सिपाही सन् २००२ मा आफ्ना बाबुको मृत्युपछि जागीर खान पुगेका थिए र उनको गायकीलाई गाउँगाउँमा स्वास्थ्य, सरसफाईलगायत अन्य किसिमका जनजागरणका लागि उपयोग गरिँदै आएको थियो ।
भारतीय प्रहरीको इमेजलाई इण्डियन आइडोलजस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमका मार्फत् उज्यालो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नेहरुको सहयोग पनि प्रशान्तका लागि सफलीभूत रह्यो ।
३. भारतीय नेपालीको गोर्खाली छवि
भारतीय नेपालीहरुले सन् १९४७ को हिन्दू-मुस्लिम दङ्गालगायत विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले भारतको रक्षाका लागि अनेक काम गरेका छन् । तर भारतले भारतीय नेपालीहरुलाई मात्र सिपाही या सेना या गोर्खाका रुपमा मात्र देखेको छ । गोर्खाभन्दा पनि अरु केही प्रतिभा छ भनेर भारतीय नेपालीले देखाउन जरुरी थियो । यही कारणले पनि प्रशान्तमा आफ्नो छवि देखेपछि भारतीय नेपाली अथवा नेपालका नेपालीहरुले पनि प्रशान्तलाई इण्डियन आइडोल बनाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ ।
४. दार्जिलिङप्रति भारतको हेपाहा नीति
सन् १९८० को दशकमा गोर्खाल्याण्ड अभियान चल्दा यो अभियानलाई यति नमज्जाले तुहाइयो कि यो तुहाईले भारतीय नेपालीहरुको नूर गिर्‍यो । दार्जिलिङमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारको नजरमा यो उत्पादनमूलक ठाउँ हो भन्ने भन्ने कुरा बिर्सिइयो । कतिसम्म भने झारखण्ड, उत्तराञ्चलजस्ता नयाँ प्रदेशहरुको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने पूरै दार्जिलिङ खण्ड भने 'चम्किलो भारत' (साइनिङ इण्डिया) को अङ्ग बन्न सकेको छैन । प्रशान्तलाई अगाडि ल्याउनुमा यो किसिमको राजनीतिक कारण पनि एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
५. प्रशान्तको मीठो व्यवहार
यत्रो ठूलो कार्यक्रम अवधिभर प्रशान्तका बारेमा कसैले नराम्रो कुरा गरेन । प्रशान्तको नम्र व्यवहार, सहयोगी भावना र सुरिलो स्वरका कारण पनि उनलाई यति माथि आउन सहयोग गर्‍यो । केही त कतिसम्म भन्छन् भने उनको मुस्कान साह्रै 'ज्यानमारा' छ !
यी मुख्य पाँच कारणले प्रशान्तलाई इण्डियन आइडोल बनाउन कसैले पनि रोक्दैन । यसमा तपाइँको भन्नु के छ ?